Namana, mana-namana, finamanana. | Ny androaniko
« Mialoha | Manaraka»
[Lasalasa fisainana ] 30 Janoary, 2015 12:54
Namana, mana-namana, finamanana.
Tsy filàna akisa akory ity lahatsoratra ity na famelezana akaiky fa eritreritra mandalo fotsiny.
Tsara erý manko ny mahatsapa hoe manana namana - na virtoaly aza - rehefa iny izy maneho eny tsindraindray amin'ny teny na fihetsika kely hoe mahatsiaro anao na tsy hitahita aza ianao sady manome toky eny ihany koa hoe eo izy raha misy ilàna azy.
Fa mahafinaritra ihany koa, ary manohina mihitsy, rehefa misy namana maneho aminao amin'ny fehezanteny roa na telo fotsiny hoe marefo ny tanja-tsainy ka tiany zaraina aminao. Tsy mangataka n'inon'inona izy fa manamaivana azy fotsiny izay fihetsiny izay. Hainy fa tsy afaka hanampy azy amin'ny olany ianao - indrindra raha lavitra azy - fa ataony fampaherezana ho azy kosa ny fahalalana fa ao ianao tsy mitsara, tsy mandiso, tsy mandray an-tendrony, tsy manaraby, tsy manao serimônina. Tsy voatery ho hainao toy ny paosinao izy vao afaka hanampy azy ianao. Ary tsy voatery handoa-danitra ianao hanampy azy.
"Fony aho kivy ratsy tsy mba nanana hitarainana, hoy i Henri Ratsimbazafy, tsisy tia, lany vatsy, zary leon’ny fiainana. Dia ianao tamin'izay no hany mba niteny tamiko ka namerina indray ny fiainana ho mamiko. Eny teny kely monja feno hatsaram-panahy, nisy hevitra mafonja ka nitondra hery ho ahy."
Tsaroako tampoka ny tenin'ilay akama be izay hoe "misy namana tsy foy kôtiana... ohatra hoe ianao". Tamin'izay aho avy dia niteny hoe tsy mi-tira mihitsy angamba aho zany an .
Fa vazivazy moa iny nandraisako azy iny fa marina fa misy mihitsy ny bandy - na dia ireny atao hoe tsy mandalo katsa-maina ireny aza , fa tena fatra-panaja ny sipa tsy foiny kôtina. Ilay "tsy foy" no tena tsindriana eto. Tsy hoe tsy sahy na tsy tiana akory.
Fa avy eo miankina amin'ny tsirairay ny mino na tsy mino izany satria ianao miaina ilay finamanana ihany no mahatsapa zay fihetsika tsara be izay. Misy ny tsy mety mino fa ry Don Juan sy ry Casanova dia afaka tsy mikôty sipa fa mandray azy ho namana toy io lazaiko io ambony io.
Fantatro fa tsy mijery ny blaogiko izay namako izay. Tsy fantany akory ny fisian'ity. Fa apetrako eto ihany ity eritreritro nandalo androany ity rehefa avy naharay "misaotra" avy taminy aho ho setrin'ny fampaherezana nasiana tsiky kely nalefako ho azy omaly.
Prends juste un chanson et oublie que t'as le blues...
0 Hevitra | "Namana, mana-namana, finamanana."